PressReader - Isolezwe: 2018-05-18 - Udaba lukaNdora lwehlisa isithunzi sebhola ezweni
Udaba lukaNdora lwehlisa isithunzi sebhola ezweni
ISIPHITHIPHITHI esesisuswe yisinqumo sikamehluleli weSouth African Football Association (Safa) uWilliam Mokhari, sokuphuca i-Ajax Cape Town amaphuzu, sihudulela phansi isithunzi sebhola laseNingizimu Afrika.
Lesi sinqumo sikhishwe ngemuva kokuthi iSafa inqume ukuthi i-Ajax yaba sephutheni ngokudlalisa umgadli, uTendai Ndoro ngoba udlale emaqenjini amathathu ngesizini eyodwa.
Okubuhlungu ngalokhu okwehlele i-Urban Warriors wukuthi ibisizimisele ngokudlala imidlalo yokuhlunga lapho ibizobhekana khona neBlack Leopards neJomo Cosmos.
Nokho ngemuva kokwephucwa amaphuzu ishoveleke ehlathini okuchaza ukuthi izobe igijima kwiNational First Division (NFD) ngesizini ezayo.
Leli qembu laseKapa lilufake enkantolo daba kodwa akucaci noma lizophumelela yini njengoba sekudlala iPlatinum Stars kweyokuhlunga.
Umbuzo omkhulu uthi ngabe yathula yathini iPremier Soccer League (PSL) i-Ajax ifika noNdoro izombhalisa kuyona, ekubeni ebesedlalele amanye amaqembu amabili phambilini? Uma kungukuthi iPSL iyawazi lo mthetho ongamvumeli umdlali ukuthi adlalele amaqembu amathathu ngesizini eyodwa, yayimnikelani uNdoro ikhadi lokudlala kwi-Absa Premiership?
Isenzo sePSL asiphulanga nje kuphela izinhliziyo zabalandeli be-Urban Warriors eKapa kodwa sishiye kukhalwa KwaZulu-Natal njengoba AmaZulu ephume kwiTop 8 emuva kokuthola kweSuperSport United amaphuzu aphucwe i-Ajax. Akungabazeki ukuthi kusazoba nomkhulu umsindo ngalolu daba ngoba alikho iqembu elingavumela ukwehlulwa etafuleni selisebenze kanzima isizini yonke.
Udaba lukaNdoro kufanele ngabe kade lwaphothulwa, uma kungukuthi abantu abebeluphethe bayayazi imithetho yeFifa ngoba ayibhalwanga kuleli sonto. I-Dispute Resolution Chamber yePSL nayo kumele isolwe ngalolu daba njengoba kuyiyona eyakhipha isinqumo sokuthi i-Ajax ingaqhubeka nokusebenzisa uNdoro.
Yinto engeyinhle ukuthi leli cala lize laphothulwa sekuphele nemidlalo yeligi, okuyiyona into esisuse umsindo omkhulu ngoba kukhona amaqembu abesejabulela ukuqeda endaweni ethize kwi-log asezithola eshoveleka phansi. I-PSL neSafa bangenza okungcono kunabakwenzile.